Fantatr’​i Josefa hoe Bevohoka i Maria | Fiainan’​i Jesosy
MATIO 1:18-25 LIOKA 1:56
FANTATR’I JOSEFA HOE BEVOHOKA I MARIA
LASA VADIN’I JOSEFA I MARIA
Bevohoka efa-bolana izao i Maria. Tsaroanao angamba fa nitsidika an’i Elizabeta havany tany amin’ny havoanan’i Jodia izy, tamin’izy vao bevohoka. Efa any Nazareta izy izao. Tsy ho ela dia ho hitan’ny olona ny kibony, ka tsy maintsy ho niady saina be izy.
Nisy olana iray koa anefa. Efa fofombadin’ny mpandrafitra iray atao hoe Josefa i Maria. Fantany ny Lalàn’Andriamanitra ho an’ny Israely hoe tokony hotoraham-bato ho faty izay vehivavy fofombadin’olona nefa minia manao firaisana amin’ny lehilahy hafa. (Deoteronomia 22:23, 24) Tsy nijangajanga i Maria, nefa azo inoana fa sahiran-tsaina izy nieritreritra ny fomba hilazana amin’i Josefa ny nahabevohoka azy. Nety ho nampiasa saina azy koa izay hitranga aorian’izay.
Telo volana i Maria no tsy teo, ka azo antoka fa efa tsy andrin’i Josefa ny hahita azy. Azo inoana fa nolazain’i Maria taminy hoe bevohoka izy, rehefa nihaona izy ireo. Niezaka mafy izy nanazava hoe ny fanahy masin’Andriamanitra no nahatonga izany. Tsy azon’i Josefa anefa ilay izy ary tena sarotra taminy ny hino an’i Maria.
Fantatr’i Josefa fa vehivavy tsara toetra sy tsara laza i Maria. Tena tiany koa izy. Na teo aza anefa ny fanazavan’i Maria, dia tsy maintsy ho nieritreritra i Josefa hoe nisy lehilahy nahabevohoka an’i Maria. Tsy tiany hotoraham-bato ho faty i Maria na ho afa-baraka, ka nanapa-kevitra izy fa hisaraka taminy mangingina. Noheverina ho toy ny efa mpivady ny mpifamofo tamin’izany, ka nila nanao taratasy fisarahana raha te hisaraka.
Raha mbola niasa saina tamin’izany i Josefa dia nandeha natory. Niseho taminy tao amin’ny nofy ny anjelin’i Jehovah ka niteny hoe: “Aza matahotra ny hitondra an’i Maria vadinao ho ao an-tranonao, fa avy tamin’ny fanahy masina ny zaza ao an-kibony. Hiteraka zazalahy izy, ary ataovy hoe Jesosy ny anarany, fa izy no hamonjy ny fireneny ho afaka amin’ny fahotan’izy ireo.”—Matio 1:20, 21.
Faly erỳ i Josefa rehefa nifoha satria lasa nazava kokoa ny zava-nitranga. Tsy nangataka andro izy nanaraka ny tenin’ilay anjely, ka nentiny tany an-tranony i Maria. Fampisehoana amin’ny besinimaro izany fa mampakatra an’i Maria ho vadiny i Josefa ary mpivady izy ireo manomboka eo. Tsy nanao firaisana tamin’i Maria anefa i Josefa raha mbola bevohoka an’i Jesosy i Maria.
Efa bevohoka be i Maria volana maromaro taorian’izay. Tsy maintsy niainga avy tao Nazareta anefa izy sy Josefa ary nanao dia lavitra. Fa nila nankaiza izy ireo nefa i Maria efa ho teraka?
Inona no azo antoka fa noeritreretin’i Josefa rehefa fantany hoe bevohoka i Maria, ary nahoana?
Nahoana i Josefa no afaka nanome taratasy fisarahana an’i Maria, nefa izy ireo mbola tsy mpivady?
Inona no nataon’i Josefa mba hampisehoana tamin’ny besinimaro fa mpivady izy sy Maria?
Hizara Hizara Bevohoka i Maria Nefa Tsy Nanambady